Barea de Madagascar: teratany reonioney efatra nantsoin’i Dupuis | NewsMada
Barea de Madagascar: teratany reonioney efatra nantsoin’i Dupuis
Niteraka resabe eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra, tsy eto an-toerana ihany fa na any ivelany aza, ny famoahan’ny gazety iray atsy La Réunion fa misy mpilalao terataniny mandrafitra ny Barea de Madagascar.
Navoakan’ny gazety Journal de l’Ile de la Réunion, tamin’ny lohateniny, omaly, fa reonioney efatra, hifandona amin’i Sénégal. Mahakasika ireo mpilalao nantsoin’i Nicolas Dupuis, hanatevina ny Barea de Madagascar, amin’ny fifandonana amin’ny Lionan’i Téranga avy any Sénégal eo amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana, ho an’ny « Can 2019 ». Fihaonana, hotanterahina eo amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny alahady 9 septambra ho avy izao.
Voalazan’ny lahatsoratra fa nitady ny razan’ireo mpilalao baolina kitra reonioney ny federasiona ka nahita fa misy ra malagasy ary nantsoina ho ao anatin’ny Barea. Anisan’ireny
i Romain Metanire, vodilaharana, miaraka amin’i Thomas Fontaine. Izy mirahalahy izay samy milalao ao Reims, ao amin’ny Ligue 1, Frantsa, avokoa ankehitriny.
Ankoatra azy ireo, eo koa i William Gros, mpanafika teo aloha tao amin’ny JS St Pierroise, saingy efa any amin’ny AS Vitré, National 2, Frantsa, manampy azy, i Jérome Mombris, mpilalaon’ny Grenoble, Ligue 2, ao Frantsa. Izy izay efa voaantso tao amin’ny Barea de Madagascar, tamin’ireo lalao teo aloha ary izao mbola voatazona ao anatin’ireo mpilalao 23 nantsoin’i Nicolas Dupuis izao indray.
Tsiahivina fa mitovy isa amin’i Sénégal ny Barea de Madagascar, eo amin’ity fifanintsanana ity, saingy manantombo amin’ny elanelan’ny baolina maty ry zareo Senegaly. «Fantatray fa sarotra ny lalao hikatrohana amin’i Sénégal, izay nahavita dingana tsara nandritra ny «Mondial 2018», saingy hiezaka hanao izay tratry ny herinay izahay, hiatrehana ny « Can » », hoy i Nicolas Dupuis.